Mercedes Maxwell Qaawan & Muuqaallo Muuqaal Galmo ah - Diiwaanka Filimka Caanka Ah
Mercedes Maxwell Qaawan & Muuqaallo Muuqaal Galmo ah
Fiiri atariishada kulul ee Mercedes Maxwell oo qaawan iyo muuqaallo jinsi oo cad oo laga soo duubay filimka 'Marfa Girl' iyo taxantiisa 'Marfa Girl 2'. Waxay muujisay bisadaheeda qaawan, dameerka iyo siilka. Mercedes Maxwell sidoo kale galmo ayey siisay ninkeeda foosha xun filimada. Kaliya ka fikir jidhkeeda qaawan oo iska iloow dhamaan kookada aad ku aragtay halkan!
Mercedes Maxwell waa atirisho iyo tusaale. Waxay caan ku noqotay doorarkeeda 'She Just Just a Shadow' (2019), ' Gabar Marfa ‘(2012) iyo‘ Marfa Girl 2 ’(2018). Waxaa laga sawiray joornaallo badan oo caan ah waxayna ka soo muuqatay dusha sare, laakiin badankood kuma jiraan internetka. Waxaa laga yaabaa inay codsatay taas that Yaa og.
Mercedes Maxwell qaawan & muuqaallo jinsi ah
'Marfa Gabar 2'
Markii hore, waxaan diyaarinay muuqaalka qaawan ee Mercedes Maxwell. Waxaa la arkaa iyada oo qaawan oo dhinac jiifa sariir nin. Mercedes waxay ku jiifineysaa madaxeeda garbihiisa waxayna la hadlaysaa sida aan u aragno boobkeeda. Muddo ka dib, waxay hoos u dhigtaa gacanteeda si ay u taabato dickkiisa ka hor inta aysan dhunkan.
Markaas waxaan arki karnaa Mercedes Maxwell oo qaawan dusha sare ee nin sida ay u galmoodaan. Waxay ku tiirsan tahay dushiisa, iyada oo tiisaheeda ay ka muuqato dhinac. Sidoo kale dabadeeda ayaa ku jirta muuqaalka.
Muuqaalka saddexaad waxaa ku jira Mercedes Maxwell oo dhinaceeda jiifa iyadoo qaawan. Waxay jiifsataa sariir dhinaceeda nin, naasaheeda oo laga fiirinayo sariirta korkeeda iyo gogosha kore oo sinta sinta ka qaawan.
Ka dib Mercedes Maxwell oo qaawan ayaa muujinaysa baadiyaha. Waxaan aragnaa iyada oo qaawan oo dhabarka u jiifta, ninkiina wuxuu ku soo dul degay iyada si uu u cuno xubinta taranka. Waxaan markaa aragnaa Maxwell oo aan ciriiri lahayn, sida iyada iyo ninku markaa isu galmoodaan. Mercedes ayaa fuushan isaga kahor inta uusan kudhaman dhabarkeeda.
Qeybta koowaad ee filimka, Mercedes Maxwell waxaa lagu arkaa kabadh iyo saraawiil. Qaawan ma jiro. Waxay dhunkataa nin ka dibna waxay ku fadhiisataa sariir agtiisa ah. Markay inbadan dhunkato, dib ayey jiiftaa ka dibna waxaan u aragnaa inay galmo ku samaynayaan daboolka hoostiisa.
Ugu dambeyntiina, waxaa la joogaa waqtigii la arki lahaa hottie Mercedes Maxwell oo qaawan oo fiidiyowyo galmo kulul lagu soo ururiyey isku duubnaan Kaliya riix ciyaarta oo arag inta hartay wasmo niiko qaawan !
ronda rousey sawiro qaawan oo xaday
rabshad ruby ​​xaday sawiro
miley cirus qaawan pic